Global Voices teny Malagasy » Manaratsy ny Toerana misy ny Fitondran’i Azerbaijan ny Hetsipanoheran’ireo Reny any Nagorno Karabakh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Avrily 2019 16:37 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Armenia, Azerbaijan, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta
Nitangorona tany amin'ny Lalankelin'ny Martiora tany Baku ireo reny, nangataka ny famotsorana an'i Togrul Gocayev, zanakà martiora iray, izay nosamborin'ny polisy sy notànana vonjimaika. Sary avy amin'ny Meydan TV. Nampiasaina teo ambany fahazoandàlana.
Ivon'ny fampielezankevitra ara-politikan'ny fitondrana jadona ao Azerbaijan ny alahelo sy ny fahaverezana mifamatotra amin'ny ady mangidy nampifanandrina an'i Azerbaijan tamin'i Armenia tany Nagorno Karabakh.
Nipoaka io fifandirana amin'ny ady tany io raha efa teo an-dàlam-paharavàna ny Firaisana Sovietika, ary mbola tsy tony foana izany ankehitriny. Teratany Azerbaijaney mihoatra ny iray tapitrisa no nafindra monina, ary nampanantena imbetsaka ny haka indray ny tany izay an'i Azerbaijan tamin'ny vanimpotoana Sovietika ny filoha Azerbaijaney, Ilham Aliyev.
Fa raha ny mikasika ny fanonerana kosa, toa nampanantena zavatra tsy vitan'ny fanjakany manankarena solitany hotazonina, na tsy tiany hotazonina mihitsy, ny Filoha Azerbaijaney, Ilham Aliyev.
Efa roa volana izao, teo amin'ny 100 teo ireo reninà miaramila mpiady namoy ny ainy nandritra ilay ady nandravarava tany Karabakh no nitety andrimpanjakana, itadiavan'izy ireo ilay fanonerana nampanantenain'i Aliyev azy ireo tany am-piandohan'ity taona ity. Nalaina baraka  foana izy ireo, nolazaina mba hiandry, na hitady fanampiana any an-kafa .
Tamin'ny 18 Desambra, nampihatra tetika hafa izy ireo.
Tsy nijaridina teo anoloanà tranoben'ny governemanta iray izy ireo fa nandeha nitsidika ny Lalankelin'ny Martiora — fasana natokana ho an'ireo miaramila mpiady namoy ny ainy nandritra ny ady tany Karabakh — nanao sarontava mainty fanaon'ny mpitsabo misy ny teny hoe “sus”, na ”moramora” nisoratra teo amin'izany.
Mino ireo reny ireo fa manan-jo hahazo 11.000 AZN (manodidina ny Ar 22.929.750) izy ireo araka ny didim-panjakana nosoniavin'ny Filoha Ilham Aliyev tamin'ny 19 Aprily 2018. Mandidy ny fanonerana ho an'ny fianakavian'ireo martiora maty na tsy hita talohan'ny 2 Aogositra 1997 izany didim-panjakana izany.
Iray amin'ireo reny zato nangataka ny hahazo ilay fanampiana. Sary an'ny Meydan TV. Nampiasaina teo ambany fahazoandàlana.
Raha totaliana, olona eo amin'ny 3.000 eo no miandry ity fandoavam-bola ity. Nanomboka ny fikarakarana ireo taratasy ny Minisiteran'ny Asa sy ny Fiarovana Ara-tsosialy tamin'ny volana Oktobra.
Saingy mikatso ilay orinasam-panjakana fiantohana, Azersigorta, izay tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny vola.
Nilaza ny Azersigorta fa efa nahazo ilay vola tany amin'ny taonjato faha-90 tany ny sasany tamin'ireo fianakaviana, fotoana fohy taorian'ny fiafaran'ny ady.
Na mety ho marina aza izany — izay lavin'ireo reny — tsy hihoatra ny Ar 71.100 ny tetibola azon'ireo fianakaviana ireo tamin'izany fotoana izany, izay ampahany bitika kely amin'ilay tolotry ny filoha.
Nanomboka tamin'ny volana Oktobra ireo hetsipanoherana ireo, fotoana fohy taorian'ny nandàvana ireo fianakaviana sasany nangataka fanampiana.
Reny iray tao anatinà tafatafa  niarahany tamin'ny Meydan TV no nitanisa taratasy fito nalefany tany amin'ny andrimpajankana isan-karazana ary taratasy 20 hafa nalefany tany amin'ireo mpikambana tao amin'ny parlemanta. Kanefa tsy nisy na iray aza namaly ireo fanontaniany, hoy izy.
Koa satria zava-dehibe ho an'ny tantaram-pirenena i Nagorno Karabakh, nametraka ireo manampahefana aminà toedraharaha sarotra ireo hetsipanoherana ireo.
Nilaza tamin'ireo fianakaviana ny solombavambahoaka Hadi Rajabli, mpanao lalàna mpomba ny governemanta izay niresaka  tamin'ireo fianakaviana tamin'ny 24 Oktrobra, mba ”tsy handoto ny dingana noraisin'ny Filohantsika tanatin'ity raharaha goavana ity.”
Feno hatezerana ny valintenin'ny iray tamin'ireo mpikambana tanatin'ilay fianakaviana: ”Tsy mandoto na inona na inona izahay, ireo mpiasam-panjakana ireo no manao izany”, hoy izy notaterin'ny Meydan TV.
Nangataka  ireo mpiasam-panjakana mba hampitsahatra ny laingany ny reny iray hafa niteny tanatinà tafatafa niarahana tamin'ny Hamam Times mifototra ao amin'ny Facebook.
Nahoana no mandainga izy ireo?! Manana fiara mitentina an-tapitrisany izy ireo, manana efitra lehibe fanaovana fanambadiana, mampidi-bola amin'ny fanamboarana sy famarotana tany, ahoana hoy ianareo no anaovan-dry zareo izany rehetra izany?! Amin'ny fangalarana ny volam-bahoaka. Tsy ho an'izy ireo ny volam-panjakana, natao ho an'ny vahoaka izany. Tokony afaka manala azy ireo amin'ny sezany ny vahoaka.
Niandany ireo fianakaviana ny solombavambahoaka iray hafa, Fazil Mustafa:
Nahazo valinteny fandavana avy amin'ny Azersigorta ny sasany tamin'ireo olona ireo. Nolazaina izy ireo fa efa naloa ny volany tamin'ny taonjato faha-90. Kanefa milaza ireo fianakaviana ireo fa tsy nahazo fanampiana toy izany mihitsy. Noho izany, mangataka porofo avy amin'ilay orinasa fiantohana izy ireo mampiseho fa efa tena nahazo izany fanampiana izany marina, raha toa kosa ka angatahan'ity orinasa ity ny fanomezan'ireo fianakaviana porofo mampiseho fa tsy mbola nahazo izany karazana fanampiana izany mihitsy izy ireo. Nahoana no mila mampiseho porofo toy izany ireto fianakaviana ireto? […] Satria tsy mahavita manatanteraka ny adidiny ireo andrimpanjakana, dia manantona ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta ny vahoaka.
Nanolo-kevitra ny hivarotana ireo tranon'i Jahangir Hajiyev ny mpanao lalàna iray fahatelo, Fazail Agamali, mba hanangonam-bola ho an'ireo fangatahana fanonerana.
Am-panefana sazy 15 taona an-trano maizina ny talen'ny Banky Iraisam-pirenena an'i Azerbaijan teo aloha, Hajiyev, noho ny fangalarany lavitrisa dolara maro tamin'ny fanjakana.
Niseho tamin'ny lohateny lehibe  an'ireo gazety Britanika ny vadin'i Hajiyev, Zamira, tamin'ny volana Oktobra 2018 noho ny filazàna fa nandany vola nihoatra ny $21 tapitrisa tamin'ny kara-bola maro tao amin'ny toeram-pivarotana Harrods tao Londra izy.
Nanasonia  baiko mba hamoronana kaomisiona hanadihady ny toedraharaha manodidina ilay fifanolanana mikasika ny fanonerana i Ogtay Asadov, mpandahateny ao amin'ny Antenimieram-pirenena. Nefa tamin'ny Oktobra izany ary mbola tsy nisy na inona na inona nivoaka avy tamin'izy io.
Hatreto aloha dia tsy nikitika ireo renim-pianakaviana nanao fangatahana ny mpitandro filaminana Azerbaijaney, fantatra amin'ny fandraisana fepetra mahery setra manoloana ireo mpanao hetsipanoherana.
Na izany aza, mbola mihatra foana ireo fepetran-dalao mahazatra ho an'ny lehilahy.
Ny 11 Desambra, nosamborin'ny polisy i Togrul Gocayev, zanakà martiora, noho ny fiampangana azy ho nanakorontana ny filaminam-bahoaka rehefa nangataka ny hiresaka tamin'ireo manampahefana izy, ary voaheloka hotànana vonjimaika an-tranomaizina mandritra ny 30 andro.
Nahena ho 15 andro izany sazy izany nandritra ny fakàna ambavany azy tamin'ny 14 Desambra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/22/132122/
 Nalaina baraka: https://www.meydan.tv/az/site/opinion/31505/
 any an-kafa: https://www.meydan.tv/az/site/opinion/31197/
 Niandany ireo fianakaviana : https://www.meydan.tv/az/site/news/30955/
 Nanolo-kevitra : https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/site/news/31417/
 lohateny lehibe: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6257433/Woman-blew-16m-Harrods-wife-Azerbaijani-banking-executive.html